Dawladda Maraykanka Oo Diyaarado Dagaal Dulmarisay Kuuriyada Waqooyi | Somaliland Today
← Maxkamad Amartay In La Xidho Saraakiishii Qabanqaabiyay Aftidii Kurdiyiinta
Guddiga Doorashada Kenya Oo Sheegay In La Qabanayo Doorashada →
Dawladda Maraykanka Oo Diyaarado Dagaal Dulmarisay Kuuriyada Waqooyi
(SLT-Pyongyang)-Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si wadajir ah u sameeyay dhoolatus militari , iyada oo Maraykanka uu labo diyaaradood oo kuwa wax duqeeya ah ee loo yaqaano B-1B uu dulmariyay gacanka Kuuriya, halka Kuuriyarada Koonfureed ay iyaduna hawada galisay labo diyaaradood , kuwa loo yaqaano F-15K.
Dhoolatuskan ayaa waxa uu imanaya xili xiisadda ka dhaxaysa Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay cirka isku sii shareerayso.
Xukuumadda Pyongyang ayaa samaysay tijaabadii lixaad ee hubka nuyuukleerka sanadkan oo kaliya, iyada oo labo gantaal dulmarisay Japan.
Diyaaradaha dagaalka Maraykanka ayaa ka dul haaday saldhigga jasiirada Guam oo hadda ka hor Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabtay in ay weerari doonto.
War qoraal ah oo ay soo saartay Kuuriyada Kuuriya ayaa lagu sheegay in dhoolatuska uu yahay mid la doonayo in lagu waabiyo Kuuriyada Waqooyi.
Maraykanka ayaa dhanka kale sheegay in dowladda Japan ay xitaa ka qeybqaadatay carbiska dagaal.
War kasoo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu la kulmay guddigiisa amniga qaranka, kana dhagaystay sida ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo halista kasoo fool leh Kuuriyada Waqooyi.
Trump iyo Kim Jong-un ayaa horay isu dhaafsaday hadalo qalafsan iyo hanjabaado kala duwan.
Maalintii arbacada, xildhibaan Kuuriyada Koonfureed ah ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay xadday sirta militariga dilkiisa, oo xitaa uu ka mid yahay qorshe lagu qaarijin lahaa Kim Jong-un iyo kaarto dagaal oo ay wada jeexeen Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanka.
Balse waqooyiga iyo koonfurtuba waa beeniyeen jiritaanka warkaas.